Doorashada filim loogu talagalay lagu koriyo: noocyada ugu waaweyn ee foornada lagu koriyo iyo shuruudaha xulashada
Ugu Weyn Ee Boxwood
Meelaha muhiimka ah ee sanduuqyada leeyihiin?
Qalabka daawooyinka ee sanduuqyada waxaa isticmaalay awoowayaasheena. In Bariga, dhirta this yaab leh waxaa loo isticmaalaa ilaa maanta, iyada oo tixgelineysa sida argagaxiso cuduro badan. Sidaa awgeed waa maxay sanduuqa qashinka ah? Boxwood waa geed xaraar ah oo koraaya 2 ilaa 12 mitir oo dherer ah. Warshadda waxaa laga heli karaa qaaradda Afrika, Yurubta, Asiya, xitaa Maraykanka.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Boxwood 2020